कृषि तथा उद्यम क्षेत्रमा महिला सामुदायिक लघुवित्तको १ अर्ब ७८ करोड लगानी
दाङ । घोराहीस्थित महिला सामुदायिक लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले कृषि, पशुपालन, उद्यम लगायत उत्पादनमूलक क्षेत्र रू. १ अर्ब ७८ करोड लगानी गरेको छ । संस्थाले आफ्ना करीब ४२ हजार सदस्यमार्फत उक्त क्षेत्रमा रू. १ अर्ब ७८ करोड ४५ लाख ५२ हजार लगानी गरेको संस्थाकी अध्यक्ष गीताकुमारी योगीले बताइन् ।
वित्तीय संस्थामा आबद्ध सदस्यहरूले रू. १ अर्ब १० करोड ९५ लाख ५३ हजार बचत गरेको र संस्थाले सदस्यहरूलाई रू. ६ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख १० हजार कुल कर्जा वितरण गरिएको बताइएको छ । संस्थाले प्रदेश ५ र कर्णाली प्रदेशका १० जिल्ला कार्यक्षेत्र बनाएर २५ ओटा शाखा र १० ओटा उपशाखामार्फत ४२ हजार सदस्यहरूलाई सेवा प्रदान गरिरहेको अध्यक्ष योगीले बताइन् । संस्थाले कृषि, पशुपालन, साना उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानीका साथै शीपमूलक तालीम समेत प्रदान गर्दै आएकाले आबद्ध सदस्यहरूको आर्थिक स्तरमा सुधारमा टेवा पुगेको संस्थाले बताएको छ ।
संस्थाले युवा तथा महिलाको व्यावसायिक क्षमता अभिवृद्धि तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक वित्तीय, प्राविधिक सेवा, तालीम तथा अध्ययन भ्रमणको व्यवस्था समेत गर्दै आएको अध्यक्ष योगीले जानकारी दिइन् । नेपाल महिला सामुदायिक सेवा केन्द्रले २०६० सालदेखि शुरू गरेको लघुवित्त कार्यक्रमले २०७५ कात्तिक ३० गते नेपाल राष्ट्र बैंकबाट वित्तीय कारोबार गर्ने इजाजतपत्र प्राप्त गरेको हो । यससँगै संस्था ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको रूपमा रूपान्तरण भएको थियो ।